DANA: ny Famaranana ny orinasa - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
Mba akaiky ny raharaham-barotra dia mety ho mifandray amin'ny fihetseham-po maro sy ny tsy azo antokaManao ahoana ny fiainana amin'ny hoavy, inona no mipetraka eo, ary inona ny zavatra tokony manokana aza ankehitriny. Isika dia mahafantatra fa mety misy olana mifandray amin'ny cessation ny raharaham-barotra. Mba hahatonga izany ho tsotra ho anao araka izay azo atao, dia tsy maintsy samy manana ny hifantoka amin'ny fomba misafidy mba mitsahatra, ary ny tahirin-kevitra. Farany - tamin'ny fomba ofisialy setDu tsy maintsy ho kamo, fa afaka mahazo ny tsy fananana asa soa. Amin'ny maha-tena-miasa izany dia midika hoe tokony ho tena raikitra nitsahatra ny asa ny orinasa. Izany no samy hafa, izay mila mandefa toy ny porofo fa ny orinasa dia nitsahatra. Izany dia miankina amin'ny antony ny famaranana, ary inona no karazana raharaham-barotra. Afaka mahazo isan'andro ny vola fanampiana raha ny raharaham-barotra iray manontolo dia nafindra tany amin'ny mpividy, ary ny fifanarahana dia ara-dalàna manan-kery. Tsy maintsy na dia efa feno na ampahany ara-dalàna misy, na tena misy ny orinasa. Raha ny fifanarahana dia tsy ahitana ny manontolo ny orinasa, tokony ho ny vokatry ho voasoratra eny, amidy, nafindra na nampodiana. Toy ny famantarana mahamarina ny famaranana amin'ny orinasa, tsy maintsy manana iray antsoina hoe ophørsbevis.
Ny ophørsbevis dia ahitana ny fanamafisana ny famaranana ny orinasa ny CVR avy ny zavatra raharaham-barotra ny fahefana sy ny fandraisana ho mpikambana avy ny fandoavan-KETRA manam-pahefana fa ny unregistering ny orinasa dia ankatoavin'ny ny HETRA.
Fanofana sy ny leasing Raha tsy maintsy ampiasaina ny nanofa na leased fitaovana, ireo fifanarahana na dia tsy maintsy ho faranana na hafindra any ny mpividy. Iza no mpividy. Rehefa ianao no kamo, ny mpampiasa, toy ny fitsipika, mandoa onitra noho ny roa voalohany ledighedsdage. Ny antsoina koa hoe H-andro Raha avelanao, dia manan-jo hahazo karama G-andro, raha toa ka ianao ao anatin'ny herinandro efatra no miara-miasa, fara fahakeliny ora, ary ny famaranana dia tsy noho ianao. Manana adidy mba hanaisotra ny roa G-andro ny isan'andro ny vola fanampiana. Noho izany, zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mahazo azy ireo karama avy amin'ny mpampiasa. Raha toa ka ianao tsy maintsy hahazo karama G-ny andro avy amin'ny mpampiasa, azonao atao ny mahazo fanampiana avy amintsika. Amin'ny toe-javatra sasany isika dia afaka mametraka ny avy noho ny tsy fahampian'ny onitra. Raha toa ka nijanona ny asa maro amin'ny fotoana mitovy ihany ny asa, ny mpampiasa dia tsy maintsy handoa anareo ny ambony indrindra ny enina ambin'ny folo G-andro isaky ny kalandrie taona. Ianao no tena nampiharina maimaim-poana.Raha manapa-kevitra ny miteny, na ianao no diso eo amin'ny famaranana, amin'ny ankapobeny, ora mahomby ny fanokanan-toerana mitovy amin'ny telo herinandro ny isan'andro ny vola azo. Na izany aza, dia afaka ny hisoroka ny fanokanan-toerana, raha toa ianao ka efa manan-kery ny antony mba hitsahatra ny asa. Raha toa ianao ka mifandray amin'ny famaranana ny hanaiky ny filazana fohy ny fe-potoana, dia tena nampiharina banga ho an'ny ny sisa ny filazana ny fotoana, ny foto-kevitra any amin'ny ambony indrindra ny ora taorian'ny famaranana. Ny lalàna dia mihatra na dia tsy ianao na ny mpampiasa dia mahafantatra fa efa faranana amin'ny filazana fohy ny fe-potoana.
Mety hitranga ao amin'ny tranga izay ny asa faritra rakotry ny lalàna, toy ny funktionærloven. Inona no afaka hanandratra ny fanokanan-toerana Indraindray dia mety ho manan-kery ny antony hoe ny asany - amin'ny toe-javatra toy izany dia mety manome anao zo cash mandray soa toy izany koa. Misy maro hafa manan-kery ny antony Noho izany, dia foana ny hevitra tsara mba hifandray antsika voalohany, raha mieritreritra ianao hoe ny asa.
Inona no dikan ny hoe, fa ny fanokanan-toerana dia mahomby. Fa ny fanokanan-toerana dia mahomby dia midika fa mety vao rivotra ao ny fanokanan-toerana nandritra ny herinandro maromaro, izay raha tsy izany dia ho mitondra ny lohateny hoe ny vola fanampiana. Izany dia ankoatra ny zavatra hafa milaza fa tokony ho voasoratra ao amin'ny asa centre, ary izay tsy afaka rivotra ao ny fanokanan-toerana nandritra ny herinandro maromaro, izay mitandrina ny fialan-tsasatra. Raha mbola tsy nanorim-ponenana ny fanokanan-toerana tsy taty aoriana noho ny telo volana aorian'ny famaranana, fahadisoan'ny amin'ny fanokanan-toerana.
Midika izany fa rehefa afaka telo volana dia afaka mahazo ny tsy fananana asa soa, na dia tsy izy rehetra karantænetimerne no nanorim-ponenana.
Ianao imbetsaka no tena nampiharina maimaim-poana. Raha in-droa ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana no tena nampiharina-poana tsy mitombina ny antony, dia mety tsy mahazo ny tsy fananan'asa. Ny mpikambana iray efa in-droa ao anatin'ny taona, hoy ny asa nefa tsy mitombina ny antony. Ny faharoa dia ny fotoana ny mpikambana dia tsy ny fanokanan-toerana, fa ny mpikambana dia mety tsy handray ny tsy fananana asa soa aloha ny mpikambana ao amin'ny mahafeno ny iray amin'ireo telo fitakian ny asa. Rehefa hivoaka ny raharaham-barotra, maro ireo zavatra tokony ho fantatry ny.
Izahay koa dia vonona hanampy anao hahita ny vahaolana tsara indrindra.
Raha toa ianao ka afaka ny tsy fananana asa soa rehefa hivoaka ny orinasa voalohany indrindra dia miankina na: ny Finoana sy ny fitiavana-ny fanambarana ny Ianao miasa ao amin'ny vadinao ny raharaham-barotra, dia afaka hiala amin'ny alalan'ny fanaovana sonia ny fanambarana ny finoana.
Ny fanambarana dia tsy maintsy ihany koa ho nanao sonia ny vadinao.
Ianao sy ny vadinao amin'ny fanoratana fa efa nitsahatra ny asa tao amin'ny orinasa. Ianao miasa ao amin'ny vadinao ny raharaham-barotra, ary efa niditra ny karama fifanarahana rehefa kildeskattelovens § dimy amby roa-polo, dia ho heverina ho ny mpiasa. Dia ho foto-kevitra ho amin'ny fe-potoana enim-bolana aorian'ny famaranana amin'ny orinasa, izay tsy afaka manomboka ny raharaham-barotra vaovao. Raha hanorina orinasa iray ao amin'ny vanim-potoana, dia ho very ny zo soa ao ny sisa amin'ny enim-bolana ny fe-potoana.
डेनमार्क - आवेदन फार्म - डेनमार्क